Ny Riandranon’I Trafalgar Any Dominica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2017 3:38 GMT
(Marihina fa tamin'ny 3 Jona 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
“The Trafalgar Falls are one of Dominica's main tourist attractions, especially for cruise ship visitors, who were there in abundance the day we went. Still we managed to find a secluded hot pool and then an even more secluded cold pool to soak in for a little while.”
” Iray amin'ireo toerana misarika mpizahatany indrindra any Dominica ny Riandranon'i Trafalgar, indrindra ho an'ireo mpizahatany mandeha sambo fitsangatsanganana, izay tena betsaka tokoa tamin'ny andro nandehananay tany an-toerana. Na izany aza, nahita dobo mafana miafinafina iray izahay ary avy eo dia nisy dobo mangatsiatsiaka mitoka-monina indray ka niroboka tao vetivety izahay . “
hoy ilay bilaogera Barbadiana Titilayo raha nanoratra tao amin'ny lahatsoratra momba ny fitsidihany vao haingana tany Dominica izay mitondra ny lohateny hoe “nivavaka aho mba haharitra ny andro, mandeha be ny fotoana.” Anisan'ireo faritra misarika mpizahatany hafa izay nasongadina tao amin'ny tahirin-tsary momba an'i Dominica avy amin'i Titlayo ny Riandranon'i Spanny , ny Dobo Emeraoda , ny Farihy Mangotraka ary ny fiangonana tranovato tranainy mahafinaritra. Antsoina matetika hoe ilay “Nosin'ny Zavaboary Karaibeana” i Dominica .